गुल्मीका पालिकाहरुमा युवा संघ नेपालको अधिवेशन: कहाँ कस्तो कमिटी बन्यो? हेर्नुस् - Gulminews
गुल्मीका पालिकाहरुमा युवा संघ नेपालको अधिवेशन: कहाँ कस्तो कमिटी बन्यो? हेर्नुस्
२०७८ मंसिर ५, २०:३८
गुल्मी, ५ मंसिर । नेकपा एमालेले पालिकाहरुमा धमाधम युवा संघ नेपाल गुल्मीको अधिवेशन गरिरहेको छ । इस्मा गाउँपालिकामा द्रोण प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा ७१ सदस्य रहेको युवा संघ नेपाल इस्मा गाउँकमिटी गठन भएको छ । कमिटीको उपाध्यक्षमा केशव घर्ति र दिपक गौतम, सचिवमा रोशन थापा, सहसचिवमा भोजेन्द्र बोहोरा र द्रोर्ण बोहोरा तथा कोषाध्यक्षमा अनिल सुनार रहेका छन् ।
त्यस्तै जित बहादुर कुवंरको अध्यक्षतामा ५१ सदस्य रहेको युवा संघ मदाने गाउँकमिटी गठन गरिएको छ । कमिटीको उपाध्यक्षमा गोकर्ण परियार, सचिवमा नविन घर्ति लगायत छन् । युवा संघ सत्यवती गाउँकमिटीको अध्यक्षमा डिल्लीराज भण्डारीसहित ५१ सदस्य कमिटी निर्माण गरिएको छ ।
धुर्कोटमा राज कुमार बिष्टको अध्यक्षतामा ५१ सदस्य युवा संघ गठन भएको छ । त्यस्तै पदम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ५५ सदस्य रहेको युवा संघ रुरु क्षेत्र गाउँकमिटी गठन गरिएको छ । कमिटीको उपाध्यक्षमा सुरज राना, सुन्दर भण्डारी र सुमन ज्ञवाली, सचिवमा कमल विक, सहसचिवमा प्रकाश ज्ञवाली, मधु पछाई, गिर बहादुर दलार्मी लगायत रहेका छन् ।